Waa Kan Xiddiga Chelsea Dhibtu Ku Haysato Ee Ay Saxeexiisa Isha Ku Hayso Newcastle United - Laacib
Waa Kan Xiddiga Chelsea Dhibtu Ku Haysato Ee Ay Saxeexiisa Isha Ku Hayso Newcastle United
October 14, 2021 Apdihakem Omer Adam
Kooxda Newcastle United ayaa u muuqata mid suuqa ay galayso bisha January dhaq-dhaqaaqiisa ugu badan ku saamaynaysa kooxaha ay Premier League ka ciyaaraan, markan ayaa lala xidhiidhinayaa xiddig aan Chelsea farxad badan ku haysan.
Warar cusub ayaa sheegaya in Newcastle ay si joogto ah ula xidhiidhaysay wakiilka weeraryahanka Chelsea ee Timo Werner tan iyo markii heshiiska 305-ta Milyan ee pound ah ay hantiilataal reer Sucuudi ahi kula wareegeen kooxda.
Magpies oo noqday kooxda ugu qanisan dunida ayaa Werner ka dhigtay mid kamida xiddigaha ay doonayaan inay kusoo xoojiyaan safkooda sida uu sheegayo wargeyska Germany kasoo baxa ee Bild.
Chelsea ayaa sanadkii 2020 lasoo saxeexatay Timo Werner oo ay 48 Milyan oo pound kasoo bixisay balse waxa uu 25 sano jirkaasi ku fashilmay inuu bandhigiisii RB Leipzig usoo min-guuriyo dhinaca Premier League.
Xilli ciyaareedkiisii koowaad ee kooxda ayuu Timo kaliya lix gool kasoo dhaliyay Premier League taas ayaana niyad jab weyn ku noqotay taageerayaasha waxa weyn ka filayay.
Kaddib in Werner si buuxda ay iskugu halayn waayeen, Blues ayaa heshiis 98 Milyan pound ah kula soo wareegtay Romelu Lukaku oo ay ka dhigeen saxeexa labaad ee ugu qaalisan taariikhda Premier League kaddib Jack Grealish oo isagu 100 Milyan oo pound ah.
Newcastle ayaa doonaysa inay ka faa’idaysato xaalada Werner ee Blues waxaana ay aaminsan yihiin inuu noqon karo xiddiga hormoodka u ah kooxdooda.